Ka Fiirso Go’aamada Shaqsiga Ah! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ilhaan Ciise Maxamed — February 8, 2020
Culumo waxa ey ahayd gabadha ugu yar ee guriga, reerka dhanna aad ayay ujeclaayeen, marwalibana waala_kool koolinjiray, Culimo markii ey qaangaartay waxa ey isbarteen wiil aan waxba baran balwadna leh, reerkeedu weyka biyadiid sanaayeen arkidda gabadhooda oo lasocoto wiil noocaas ah waxa eyna isku qanciyeen in ey la’imaan doonin macnaha in eysan gabadhooda keensan doonin oo hala’igu daro eysan dhihi doonin.
Balse muddo laba bilood ah gaddib Culimo waxaa soodoontay wiil Adeer keed dhalay oo aqoonyahan ahaa, reerkii oo dhanna waa ey kufarxeen balse Culimo ayaa gees isaga riixday oo isasoo miiqidday, inanka adeerkeed dhalay oo goa’aan ayay kugaartay in eysan rabin wiilkaan balse ey dooneyso wiil uu xiriir jacayl kala dhaxeeyo.
Culimo Aabaheed iyada oo yar ayuu dhintay waxaa sookoriyay Hooyadeed oo qoyska u ahayd laf dhabar, Hooyo waa iska miskiine gabadhii warkeeda ayay yeeshay waxaana talo lagu gooyay in uu soodoono wiilka ey sheegeyso. Anigu waxaanba is iri Culimo Aabaheed haddii uu noolaan lahaa wiilka uu adeerka u yahay ayuu siin laha oo warkeeda lamaqaadan lahaynba.
Wiilkii Culimo ey ballamisay ayaa guriga yimid iyo reerkiisa, Marki la’arkay in wiilkaan uu yahay wiilkii ey kacabsanayeen reerka oo horay loogu arkay, si’isku mid ah ayaa loodiiday oo reerkii sicad ayaa loogu yiri gabadheena siisanmeyno inankaan dib jirka ah. Balse Culimo ayaa lasoobaxday af adayg oo go’aan kugaartay in eysan reer unoqanayn wiilkaas cidaan ahayn, bal yaabkaas daya! War maxay ku aragtay waala yaabee? Miysan ujeedin xumaantiisa?
Adiguba kaalay kudheh wiilku kuguma haboono ee kajoog?!
Dood iyo murugo dheer kaddib Culimo waxaa lasiiyay wiilkii ey dooqatay, Hooyadeedna waa ey kacalool goosatay iyada oo xasuusaneysa rafaadka iyo dhibta adag oo ey kusoo korisay. Culimo saaxiibteed oo weydiisay waxa wiilkaan ey kujeclaatay in ey usheegto, waxa ey si hoose ugu sheegtay in wiilkaan ey kuraaceyso (Style) isteelka.
Saaxiibteed waxa ey kutiri sow umajeedid wiilkaan balwad ayuu leeyahay oo nimanka balwaddalehna mafiicna oo balan malahan e? Culimo waxa ey ugu sookoobtay warkii Naa balwad badan malahan ee Taabuu oo kaliya ayuu cunaa. Yaasiina Taabuu yaakadaran, halki taabuu ee halmar lasaarto waxa uu udhigmaa 27xabo oo sigaar ah dhinaca kiimikada.
Culimo hadda waa garoob heysato labo caruur ah oo aan cidi kubiilin iyadana aan heysan wax ey kubiisho sababtoo ah guurkeedii ayay uga hartay waxbarashadii.
Culimo Hadda waxa ey iisheegtay in ey kashallaayneyso hal go’aan oo ey qaadatay kaas oo %90 dumiyay nolosheedii, Waxa ey igu tiri iyada oo murugo kamuuqato uma maleynayn in aan mar’uun kashallayn doono go’aan aan aniga qaatay!
Balse waa kan maantay ibaday diif iyo darxumo, oo waataa uu meel cidlo ah iiga dhaqaajiyay ninkii aan reerkeyga kadoortay!!!
Aqristow maka fakartay in hal go’aan oo aad adiga qaadato uu noloshaada barkeed dumin karo tusaale: haddii aad go’aan kugaarto in aad tahriibto marki aad iskuulka dhameyso, oo aadna kadhabeyso oo aadbaxdo oo Liibiya lagugu xiro, aadna ku xirnaato muddo 12sano ah sida horay dad Soomaaliyeed ugu dhacday kawaranbo.
Marki aad iskuulka dhameyso 12ka sano ee ku xigta waa waqtiga ugu muhiimsan cimrigaaga waxaadna kunoqon kartaa aqoonyahan, Ganacsade,Siyaasi,Dhaqtar,Ijineer!.
Haddii aad tahriib kubixiso meeqo sano oo noloshaada ah ayaa dumisay!!!.
Tusaale kale: kawaran haddii aad go’aan kugaarto in aadan waxbarasho danbe aadin kadib marki aad iskuulka dhameyso, waalidkaana aad war kadddiido oo aad kutiraahdo anigu waxba mabaranaayo sidaasna aad kujoojiso waxbarashadii, maalin walibana aad seexato cunto cabto asxaabtaadana aad raacdo, ogaawna ardaydii aad iskuulka isla dhameyseen Jaamacado ayay ku biireen.
10 Sano marki ey kasoo wareegto natiijada maxay noqaneysaa?
Dabcan adiga oo ciyaalka xaafadda ah iyo iyaga oo ah Dhaqaatiir ama Injinneero bulshada muhiim u ah oo lagu tashto. Aqristow ma’igu raacsantahay in go’aamo fudud oo aan qaadanno nolosheenna saameyn weyn kuyeelan karaan?
Tags: Kafiirso G’aamada Shaqsiga Ah?
Next post Aqoonta iyo Farsmada Muuqaal Duubista
Previous post Wixii Aad Saadsataaba Waa Wax Kugu	Soo Maqan!